राइस कुकर कुन दिन सन्दुकमा थन्किने हो भनेर सधैं टेन्सन लिएर बस्दो हो।
पढ्न त नेपाल जलश्रोतको धनी देश भनेर पढेको हो। ब्राजिल पछि नेपाल विश्वमै पानीमा धनी छ रे। उही गाउँ घरतिर कामीको घर चुहिने,दमैको फाटेका कपडा जस्तै त होला नि। जांहा पानी धेरै छ,त्यही बिजुली नहुने। हाल दैनिक १२ घन्टा लोड सेडिगं हुंदैं छ रे।पोहोर साल १८ घण्टा सम्म भएको थियो। त्यो हिसाब अनुसार अहिले कि १९ घन्टा होला,१८ घण्टा त ग्यारेन्टी। बिध्धुत भनेको निकासको कडी हो। अब बिजुली नै छैन भने के को बिकास? भात पकाउन राइस कुकर चल्दैन,कल कारखाना,बन्द ब्यपारको कूरै नगरौँ। देशलाई जनताकै बोझ जस्तो। कस्तो Hopless situation।
एक जना ब्लगर Basant Giri ले(बसान्ट जिरी) अमेरिकामा आफूले भोगेका कुरा भनेका थिए। घर कांहा हो भनेर सोध्छन्,नेपाल भन्यो कोही चिन्दैन। माउन्ट एभरेष्ट भनेर भन्यो,त्यो त चाइनामा होइन र भन्छन। चिनमा ओलम्पिक हुँदा सगरमाथामा Olympic Flame लगेका थिए। ल भन्नुस् त अब सगरमाथा कांहा पर्ने रहेछ? हैन बुद्धको देश भनौं भने छिमेककै भारती साथीहरूले पनि बुद्ध त भारतमै जन्मेका होइनन् र भन्छन। भारती किताबको त के कुरा,बुद्धको जन्म स्थलको कुरै छोडौँ,सगरमाथा पनि भारतको उत्तरमा पर्छ भनेर त मैले नै पढेको छु। बिचरा ति भारतीको के दोष? ३-४ बर्ष अघी २-४ घण्टा लोडसेडिगं हुन्थ्यो अब १८ घन्टा हुन्छ,यहि चाल हो भने २-३ बर्षमा २४ घन्टा लोडसेडिग हुने पक्का छ। त्यस पछी आइतबार बिजूली,सोमबार बन्द,मङ्गलबार बिजुली,बुधबार बन्द यस्तै खाले लोडसेडिगं तालीका निस्कन्छ होला। बरु हाम्रो नेपाललाई लोडसेडिगंको देश " Nepal- The Country of Load Shedding" भनेर चिनाउदा बेश होला। दिनको १८ घण्टा लोडसिडिगं हुने नेपाल बाहेक संसारमा अरू कुनै देश होलान् त?
ब्लगर बसन्त गौतमले लोड सेडिगंको तालीका राखेका रहेछन्। खै कुन पत्रिकाको कट सिट हो,मैले पनि आफ्नो घर भएको ठाउँलाई सर्कल गरेर राखेको छु। म नेपालमा भएको भए अब बिजुली जान करिब १५-मिनेट बांकी रहेछ। उसो भए छिटो छिटो यो ब्लग पोष्ट गरिहाल्नु पर्यो। नत्र ब्लग लेख्ने आज,टाँस्ने भोलि,पढ्ने पर्सी हुनसक्छ।
नेपाल फर्कन मन लाग्छ तर फेरी डर लाग्छ,
कहिँ भबिश्य मा पनि लोडसेडिङ त लाग्ने हैन ???
Nice post describing the terrible situation of Nepal yet i love NEPAL
नेपाल फर्कदैंमा आफ्नो भबिष्यमा लोड सेडिगं नलागल्ला उमेश जी। यती सार्है निराश त नहुनु पर्ला।
ठिक भन्नु भयो दुर्गा जी। आफ्नो देश सधैं प्यारो हुन्छ।